Mawiricheya ari Nyore Kusundira - Warema Wiricheya
Nyore kusunda mavhiripu zvinogadzirwa zviri nyore kune vanochengeta.
Nyore Push hwiricheya Bata Mabhawa
Nyore kusunda hwiricheya bata mabara anowanzo kuve ergonomically akarongeka, uye ane zvinhu zvakadai sefuro kudzikamisa maronda ekumanikidza eganda kana blister. Mazhinji anobata mabhawa akagadzirwa kuti ave nyore kusunda mavhiripu, iva nezvinhu zvinotevera:
Inobatsira kudzikisa marwadzo uye kuneta kubva mukusundidzira a hwiricheya.
Yakagadzirirwa kukwana pamusoro pemabatiro e wiricheya yemawoko.
Inokutendera iwe Push a hwiricheya neruoko rumwe.
Mavhiri ekumashure pane nyore kupusha hwiricheya inofanirwa kugadzirwa ne lightweight zvinhu kubvumira yakaderera simba rinobvira rinodiwa kusunda chigaro. Kutakura mavhiripu zvakare ari nyore kupusha mavhiripu, sezvo vachiuya nemavhiri madiki, chimwe chezvikonzero chekutenga mhando iyi hwiricheya ndeyekuti muchengeti anogona kusundira mushandisi mushe asingashandise simba rakawandisa nekusunda kwese.
Nyore Push hwiricheya Push Mabhawa
Karman Healthcare inopa nyore kupusha mabara, iwo ari nyore kwazvo kusunda uye anogona kusundidzirwa neruoko rumwe kana zvichidikanwa. Paunoshandisa maoko maviri kupusha, iyo bar yekukanda inoendesa simba yakanangana ne hwiricheya pamwe nesimba shoma rinodiwa. Iyo ergonomic grip dhizaini inobvumira uyo anotarisira achisunda chigaro, kuisa maoko avo munzvimbo dzakasiyana siyana dzakanaka, zvichibva pamamiriro ega ega. Izvo zviri nyore Push hwiricheya Push bar inobatsira kana uchifambisa pamusoro ramp, isina kuenzana nzvimbo, dzakapinza inofarira, kana carpeting.
Kumusoro Kwekuchengetedza Nzvimbo
Kufamba kwedu mavhiripu zviri nyore kupeta uye zviri nyore kutakura, izvi zvinokutendera kuti uenderere mberi nezuva rako pasina nguva inopedza zviitiko izvo zvingangodiwa nezvimwe zvigaro zvekufamba. Kusiyana neyakajairika yakajairwa mavhiripu, Karman Healthcare inopa kufamba hwiricheya iyo yakagadzirirwa kurerukirwa uye nyore. Macheya edu anogona kukwana nyore nyore muduti remotokari, kana pachigaro chekumashure. Vanogona zvakare kukwana pamwe nyore mukati medenga rekuchengetedza nzvimbo, kunyangwe iri muchitima, bhazi, kana ndege, rwendo urwu hwiricheya inogona kukwana munzvimbo dzakanyanya miniti. Kufamba kwedu kufamba hwiricheya kurema kurema kwakaringana kusimudzwa mukati nekubuda mutangi kana chero imwe nzvimbo yekuchengetera nemushandisi.
Push Bata Chairs
mavhiripu izvo zviri nyore kusunda zvinowanzo kureruka uye dzimwe nguva zvinotakurawo mavhiripu. Kusunda, kudhonza, uye kufambisa vanhu mukati mavhiripu inogona kunetsa uye kunetesa kune vanochengeta. Kana iwe uchitsvaga iyo hwiricheya izvo zviri nyore kusundidzira, Karman Healthcare inopa dzakasiyana siyana Lightweight mavhiripu uye kutakura mavhiripu izvo zvinoitwa kuti zvive nyore kumushandisi kana muchengeti kusundira kana kufambisa. Zvichienderana nezvido zvako nemararamiro ako, isu tinopa zvigaro zvinokwenenzverwa zvigaro zvinofambisa zviri nyore uye zvinogona kusundirwa kwenguva yakareba pasina zvinokanganisa unhu checheya. Iko kune zvakare sarudzo yekutenga mushure memusika mavhiri ekumashure ayo akareruka uremu pane akajairika mavhiri, ayo anotendera mushandisi kana muchengeti kusunda kana kudhonza zviri nyore kwazvo.
famba mavhiripu ipa vashandisi netambo diki yemwenje iyo inogona nyore kupinda munzvimbo zhinji dzekuchengetera.
Iyo furemu yechiedza inobvumira vashandisi kutakura chigaro vachitenderedza pasina kunetseka kweiyo inorema furemu.
Nderupi Rudzi rwe Kufamba Wiricheya Zvakandinakira?
famba mavhiripu ndiyo yakanakira sarudzo yekufamba kana zororo.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo maererano nekufamba kwedu hwiricheya.
Yekutakura Wiricheya Yakagadzirirwa Kwakakura Kunaka uye Kugona
Midziyo Yekuita Kuti Wiricheya Yako Ive Nyore
Chiedza Kufamba Wiricheya
Kuwana Wiricheya kubva munzvimbo yekuchengetedza
Wiricheya Yekutakura Sachigaro Sarudzo dzeVatariri
Imwe pfungwa ya “Mawiricheya ayo ari Nyore Kusunda"
Pingback: Mashandisiro Anoita Wheelchair - Erickkasysavane